नेप्सेको ओरालो यात्रा कायमै, आज कुन कम्पनीले कति घाटा बेहारे ? हेर्नुस् विवरणसहित – Radio Prabhav 92.4 Mhz
July 8, 2019 अर्थ / गृहपुष्ठ
नेप्सेको ओरालो यात्रा कायमै, आज कुन कम्पनीले कति घाटा बेहारे ? हेर्नुस् विवरणसहित
आइतबार जस्तै आज पनि शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्ने क्रम जारी रह्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ८।७० विन्दुले घटेर एक हजार २४७।३५ विन्दुमा पुगेको छ ।
यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १।५६ विन्दुले घटेर २६८।७९ मा झरेको छ । नेप्से घट्दा कारोवार रकम भने झण्डै रु ६० करोडको हाराहारीमा रहेको छ ।
कूल १७१ कम्पनीको २९ लाख १० हजार १५३ कित्ता शेयर रु ५९ करोड १० लाख ५३ हजार ८१२ मूल्यमा कारोवार भएको छ ।
स्टकका अनुसार कारोवार भएका कूल ११ उपसमूहमध्ये आज दुई उपसमूहको शेयर बढेको छ भने नौ उपसमूहको शेयर ओरालो लागेको छ ।
जलविद्युत् २।४ र सामूहिक लगानी कोष ०।०५ विन्दुले बढेको छ । यस्तै बैंकिङ ९।४९, होटल ०।९२, विकास बैंक ६।७१, वित्त २।६९, निर्जीवन बीमा ६३।२२, उत्पादन ८।०४, अन्य ३।१७, लघुवित्त ६।५ र जीवन बीमा ६४।०८ विन्दुले घटेको छ ।
स्टकका अनुसार आज प्रभु बैंकको संस्थापक शेयरको सबैभन्दा बढी कारोवार भएको छ । सो बैंकको रु ११ करोड ४५ लाख ७० हजार बराबरको कारोवार भयो ।
यस्तै सिभिल बैंक रु तीन करोड ८० लाख २० हजार ९९६, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनको रु तीन करोड आठ हजार, प्रभु बैंकको रु दुई करोड ७६ लाख २० हजार ३३९, नेपाल बैंक लिमिटेडको रु दुई करोड ३६ लाख ८६ हजार ८८८, सेञ्चुरी बैंकको रु एक करोड ७५ लाख सात हजार ७७३ र मेगा बैंकको रु एक करोड ६० लाख ४८ हजार ३१० मूल्यमा कारोवार भई शीर्ष स्थानमा रहे ।
स्टकका अनुसार आज इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले १० प्रतिशतले कमाए । यस्तै आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी ७।०४, अरुण काबेली पावर ३।८५, घलेम्दी हाइड्रो ३।६१, सिनर्जी पावर ३।३७, र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकका शेयरधनीले ३।२५ प्रतिशतले कमाए ।
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले ९।९१ प्रतिशतले गुमाए । रैराङ हाइड्रोपावर ५।३०, वेस्ट फाइनान्स कम्पनी ४।७६, सगरमाथा इन्स्योरेन्स ३।८७, मल्टीपर्पोज फाइनान्स कम्पनी ३।८४ र समिट लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले ३।७७ प्रतिशतले गुमाए ।
पर्याप्त बिरुवा उत्पादन नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा
बाढीले एकरातमै बगायो ३ करोडको पुल